Ongorora nharembozha inonakidza tekinoroji musimboti, unoziva zvakadii
Njere tekinoroji, kamwe chete iri kure kwazvo nesu, inogona kungoonekwa mune yesainzi yekunyepedzera blockbusters, ikozvino isu tinogona nyore kuona huchenjeri tekinoroji, tinongoda diki smart smart, unogona kuona kurota kwemhepo kutonhodza otomatiki, mwenje otomatiki abva, chete sekuda kuva ca ...
Ndeapi mabhenefiti epamusoro matanhatu ekupfeka headset yeBluetooth
1. Kusangana neMubatsiri Teleconferencing yakajairika mune yanhasi basa nehupenyu. Kana iwe uchifanira kusimudza foni kweawa imwe munzvimbo iri kure, mutsipa wako nemaoko zvicharwadza kwazvo. Ini ndinotenda kuti vadzidzi vakasangana nemhando iyi yekurwadziwa nekutambura vachada kuwana musoro weBluetooth ...
Kugadziriswa kwemazuva ese kwemaearphones
Mahedhifoni anoita basa rakakosha muhupenyu hwezuva nezuva, kufamba mumugwagwa kunogona kuona vanhu vazhinji vachifamba, vachapfeka mahedhifoni kunakidzwa nemumhanzi. Iyo yekutarisa headset yakakosha zvakanyanya mune zvehunyanzvi kurekodha uye mitambo nekuda kweshoko rayo rakatanhamara revanhu. Asi kana iyo isiriyo yekuchengetedza uye yekushandisa ikakuvadza ...
Mahedhifoni edu ikambani inobatanidza maindasitiri uye kutengeserana neyemakanda mahedhifoni
Ngatitangei nekuunza mahedhifoni. Mahedhifoni edu ikambani inobatanidza maindasitiri uye kutengeserana neyemakanda mahedhifoni. Ini ndinotenda munhu wese anoziva kuti mahedhiyo mahedhiyo pamusika anoumbwa nema tws wired mahedhifoni uye asina waya mahedhifoni, asi ini ndinotenda unogona kusaziva ...
Performance maitiro eiyo ks-017
1. Maitiro ekuita e-ks-017 Achasimudzira dhizaini dhizaini yekuzvimiririra, kureruka uye fashoni yemusoro Green inofanana nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kuchengetedza, uye yedu 017 inonyatsotsanangura izvi hunhu ...